भारतको उत्तराखण्डमा फेरि फुट्यो हिमताल, सञ्चार सम्पर्क विच्छेद - GalaxyPati
शरीरमा पानी कमी भए के हुन्छ ? दैनिक कति पिउने ?
कोरोनाबाट बच्न डबल मास्क लगाउनु कत्तिको जरूरी ?
नेपालमा थप ५ हजार ७६३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
आज १३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
भारतको उत्तराखण्डमा फेरि फुट्यो हिमताल, सञ्चार सम्पर्क विच्छेद
२०७८ बैशाख ११, शनिबार १२:०१
काठमाडौं । भारतको उत्तराखण्डमा फेरि हिमताल फुटेको छ । भारत–चीन सीमा क्षेत्र नजिक चमोलीको जोशीमठ भन्ने स्थानमा शुक्रबार हिमताल फुटेको सूचना आएको उत्तराखण्ड सरकारले जनाएको छ ।
सो क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएकाले पूरा जानकारी लिन कठिन भइरहेको उत्तराखण्ड प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी अधिकारीहरुले शनिबार साँझसम्ममा पूरा विवरण आउनसक्ने बताएका छन् । सो क्षेत्रमा आवादी कम भएकाले धेरै क्षति नभएको अनुमान गरिएको छ ।
बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनका कमाण्डर कर्णेल मनिष कपिलले यो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माणको काम जारी राखेको र सो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कोही पनि हताहत नभएको बताएका छन् । जोशीमठ–मलारी सडकखण्ड भने हिउँले ढाकिएको छ । त्यसैले केही व्यक्तिहरू फसेको हुन सक्ने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री तिरथ सिंह रावतले हिमताल फुटेको सूचना आएकाले सतर्क रहन सूचना जारी गरेका छन् । कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर केही परियोजनाहरुमा रातिको समयमा काम नगर्न निर्देशनसमेत दिइएको उनले जानकारीसमेत दिएका छन् । ।
यसअघि उत्तराखण्डमै हिमताल फुटेर अलनन्दा नदीमा आएको बाढीमा परी ५० जनाको मृत्यु भएको थियो केही बेपत्ता छन् । यो घटनामा केही नेपाली मजदुरहरु पनि परेका छन् ।
भारतमा १० हजारभन्दा धेरै हिमताल रहेको बताइन्छ जसमध्ये उत्तराखण्डमा मात्र करिब १५ सय हिमताल छन् ।